बिमानका पाइलटको बिषयमा नयाँ तथ्य : राजिनामा दिइसकेका पाइलटलाई के जबरजस्ती जहाज उडाउन लगाइएको थियो ? (भिडियो सहीत), – My Blog
Home समाचार बिमानका पाइलटको बिषयमा नयाँ तथ्य : राजिनामा दिइसकेका पाइलटलाई के जबरजस्ती जहाज उडाउन लगाइएको थियो ? (भिडियो सहीत),
बिमानका पाइलटको बिषयमा नयाँ तथ्य : राजिनामा दिइसकेका पाइलटलाई के जबरजस्ती जहाज उडाउन लगाइएको थियो ? (भिडियो सहीत),
starnews - Mar 14, 20180049
सोमबार त्रिभुवन बिमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको युएस बगंलाको बिमानका पाइलटको बिषयमा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । बिमानका पाइलट अविड सुल्तानले उडान भर्नु अघि नै कंपनीमा राजिनामा पत्र बुझाइसकेको खुल्न आएको छ । उनका साथीहरुले संचारमाध्यम मार्फत यो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन ।
यद्यपी कंपनीले भने पाइलटले राजिनामा बुझाइसकेको बिषय लाई स्वीकार गरीरहेको छैन । राजिनामा दिइसकेको अवस्थामा जहाज उडाउन लगाउनु भनेको नैतिकता बिपरीत हुने मृतक पाइलटका साथीहरुले बताएका छन । पाइलट सुल्तानको बंगलादेशको उत्तरामा घर छ ।
जहाँ उनी आफ्ना श्रीमती र छोरा सहित बस्ने गर्दछन । उनको परीवारका केही महत्वपुर्ण किस्साहरु सार्वजनिक भएका छन । साथै को पाइलट पृथनाका पनि केही पारीवारीक तस्वीरहरु सार्वजनिक भएका छन । जुन हेर्दा जो कोहीका आँखा रसाउछन । हेर्नुहोस पाइलट अविड र पृथनाका महत्वपुर्ण पारीवारीक पृष्ठभुमी सहीतको यो भिडियो
Previous Postएक दिवसीय मान्यताका लागी भोली नेपाल र पपुवा न्युगिनी खेल्दै , अग्रीम सुभकामना सहीत लाईक सेयर गरौ !
Next Postविमान दुर्घटनाका कारण राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्दै बिहीबार राष्ट्रिय विदा